वामदेव गाैतमलार्इ संसदमा भित्र्याउन रामवीर मानन्धरले पार्टीमा बुझाए राजीनामा
काठमाडौँ । नेकपाका नेता वामदेव गौतमलाई संसदमा भित्र्याउन बाटो खुला गर्न काठमाडौँ क्षेत्र नं. ७ बाट निर्वाचित सांसद रामवीर मानन्धरले राजीनामा गरेका छन् ।
मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सांसद मानन्धरले कसैको दबाबमा नभई वामदेव गौतमलाई आफैले उक्त क्षेत्रबाट प्रस्ताव गर्दै राजीनामा दिएको बताए ।
सोमबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले गौतमलाई काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर ७ बाट उपनिर्वाचनबाट संसदमा भित्र्याउनेबारे छलफल भएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा सांसद मानन्धरले नेता गौतम पार्टीमा धेरै दुःख गरेको सिनियर नेता भएको हुनाले क्षेत्र नं. ७ को विकासको लागि ठाउँ खाली गरेको बताए । यसअघि विभिन्न ठाउँबाट गौतमलाई उठाउने तयारी गरिएपनि त्यो सफल हुन सकेको थिएन ।
मानन्धरले पार्टीलाई बुझाएको राजीनामाको बारेमा पार्टीमा भोलि छलफल हुने र त्यहाँबाट निर्णय भएपछि सभामुखलाई औपचारिक राजीनामा बुझाउने पनि जानकारी दिए ।